နည်းပညာဆိုင်ရာစုစည်းမှုများ: software နှင့် တစ်ခြား ရှာချင်တာများကို ဘယ်လို ခဏလေးနဲ့ ရှာရမလဲ
ကျွန်တော့် ၀ဘ်ဆိုက်မှာ တင်မဟုတ်ပါဘူး. တစ်ခြား ဆိုက်တွေမှာ ရှိတာတွေကို ဘယ်လို ရှာလို့ရသလဲ google ကနေ ဘယ်လို ရှာရမလဲ ဆိုတာကို ဒီနေ့ည ပြောပြပါ့မယ် . ရှာနည်းက လွယ်လွယ်လေးပါ . ဥပမာဗျာ your uninstaller ဆိုတဲ့ software တစ်ခု ကျွန်တော့် ၀ဘ်ဆိုက်ထဲမှာ ရှိနေတယ် . ဘယ်နေရာမှာ ရှိသလဲဆိုတာ လိုက်ရာရတော့မယ် . အချိန်တိုလေးအတွင်းမှာ ရှာလို့ရပါတယ် . အဲ့တော့ အောက်က နည်းအတိုင်း ရှာကြည့်လိုက်ပါ .
(၁) www.google.com ကို ၀င်လိုက်ပါ .
(၂) "your uninstaller .nyinaymin.org" လို့ google ကနေ ရိုက်ပြီး Google search ကို နှိပ်လိုက်ပါ.
(၃) အပေါ်ဆုံးမှာ မိမိရှာချင်တဲ့ link ကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် .
သတိထားစေချင်တာက "your uninstaller .nyinaymin.org" ဆိုတဲ့နေရာမှာ your uninstaller နှင့် .nyinaymin.org ဆိုတဲ့ ကြားထဲမှာ space bar လေး တစ်ချက် ခြားစေချင်ပါတယ် . အဲ့လို ရိုက်ပြီးသာ ရှာကြည့်ပါ . ကျွန်တော့် ၀ဘ်ဆိုက်မဟုတ်ပဲ တစ်ခြားဆိုက်တွေလဲ ရှာကြည့်လို့ရပါတယ် . ရှေ့က စာလုံးနေရာက မိမိရှာချင်တဲ့ software နာမည် ပြီးတော့ space bar ပြီးတော့ မိမိရှာချင်တဲ့ ၀ဘ်ဆိုက်နာမည် အဲ့လို ရှာကြည့်လိုက်ပါ . ဒါက အလွယ်ဆုံးနှင့် အမြန်ဆုံး ရှာနည်းပါ. အားလုံးအဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် .
Posted by P Kyaw Swa at 10:27 PM